Banyere Anyị - Xinxiang zaa Electronic Technology Co., Ltd.
Xinxiang zaa Electronic Technology Co., Ltd.emi odude ke South elu mgbanaka nke Xinxiang elu tech Mpaghara, gbara ya gburugburu kọleji na mahadum, nnyocha sayensị na agụmakwụkwọ agụmakwụkwọ. Ka ọ dị ugbu a, ụlọ ọrụ ahụ nwere ndị ọrụ 60, nke ndị nka sayensị na teknụzụ nwere ihe karịrị 35%. Ya azụmahịa akporo ekpuchi R & D na ahịa nke nwere ọgụgụ isi robot akụrụngwa, eletriki ngwaahịa, ọgụgụ isi ngwá na mita, sensọ, ugbo ala ígwè na ngwa mma; mmepe nke ngwaahịa eletriki na oru ngwanrọ na oru nyocha ọrụ; na oru nke ahia na mbubata ahia nke ndi ozo.
R & D base na-ekpuchi Beijing, Shanghai, Nanjing, Shenzhen na Guangzhou, na ntanetị ahịa na mba ahụ dum. Companylọ ọrụ a nwere ndị ahịa na-ere ahịa dị elu na-ekpuchi mba ahụ dum, na-enye ndị ahịa ihe zuru oke, jiri nlezianya na ngwa ngwa n'oge ọ bụla. Na-adịbeghị anya, anyị ụlọ ọrụ na-akwadebe na-ewu nwere ọgụgụ isi mmezi n'elu ikpo okwu nnyocha na mmepe otu. Dị ka onye ọsụ ụzọ na ụlọ ọrụ eletriki, na-adabere n'echiche ụlọ nke ijikọta njikwa ike na teknụzụ dijitalụ, anyị wuru ngwọta zuru oke maka njikwa njikwa ike. Njikọ atọ nke nchọpụta nyocha ọchịchị na-etolite akaghị mechiri emechi, na-enye azịza ọkachamara na ngwaahịa maka usoro ike na ụlọ ọrụ na-eri ike Anyị ga-emepụta gburugburu ebe nchekwa ọkụ na nchekwa dị ọcha iji kpuchido ike ụwa niile.
Ka ọ dị ugbu a, ụlọ ọrụ ahụ nwere usoro ise nke kpakpando, gụnyere onye na-achịkwa ikike nkwụghachi ụgwọ, ihe mgba ọkụ na ihe ndozi thyristor, onye nwere ọgụgụ isi na ngwa ọrụ netwọkụ, nke ha na ụlọ ọrụ anyị mepụtara ma mepụta ya, ụlọ ọrụ ahụ nwekwara ụlọ ọrụ mmepụta oge a, elu ule akụrụngwa, akpa ndakọrịta ule akụrụngwa, SMT akpaka mgbawa nzukọ akara na oru oma ngwaike mmepe n'elu ikpo okwu, nakwa dị ka ya ebu mmepe na imewe otu, nke nwere ike n'ụzọ zuru ezu na-ekwe nkwa nnwere onwe akara nke kwekọrọ ekwekọ mmepụta nke ọhụrụ ngwaahịa, na àgwà arụmọrụ na nchekwa nchekwa nwere ike ịchịkwa kpamkpam ebe, yabụ ụlọ ọrụ anyị nwere nke ya Na mgbakwunye na ịnwe ikike mbubata na mbupụ nke onwe, ụdị ngwaahịa nwekwara ike inyere ndị ahịa si mba ofesi aka inweta OEM na ODM. Na 2020, ụlọ ọrụ ahụ nwekwara usoro nhazi nke ahịa ụwa. Na mgbakwunye na mbupụ ngwaahịa ndị China na ụwa, o guzobekwala ụlọ ngosi ihe ngosi mba ụwa. Dabere na mbubata China nke ụfọdụ ndị nnọchi anya mba ofesi, ọ nwere ike ịghọta nkwalite ma ọ bụ ọrụ na ndozi nke ngwaahịa mba ofesi na ọwa ụlọ Mezue ọrụ nnabata na mbupụ nke onwe.
Kpọtụrụ anyị, anyị ga-enwe ike ịrụ ọrụ ọnụ iji mepụta amamiihe.